Khilaafka khaliijka oo kala qeybinaya Soomaaliya – Kalfadhi
Bishan oo kale sanadkii hore ayuu billowday khilaafka wadamada Khaliijka carbeed markii dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxreyn ay xiriirka u jareen dalka Qatar laakiin madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu sheegay in Soomaaliya dhexdhexaad ka noqonayso arrinta Khaliijka balse tani kuma qancin dowladda Sacuudiga oo u aragtay xukuumadda Muqdisho inay la safan tahay Qatar.
Warbixin ay soo saartay kooxda xasaradaha adduunka ayay ku shaacisay in khilaafka wadamada gacanka carbeed uu saameyn ku yeeshay Soomaaliya islamarkaana uu kala qeybiyay siyaasiyiinta dalka.
“ Wadamada ishaya ee Khaliijka, si toos ah iyo si aan toos aheynba, waxaa cad inay abuureen kala qeybsanaanta ka jirta dowladda dhexdeeda iyo kooxaha mucaaradkaba, waxayna adkeynaysaa arrintan dadaalada lagu gaari karo tanaasul,” sidaasi waxaa lagu tilmaamay warbixinta kooxda xasaradaha adduunka.
Waxaa intaa la raaciyay in qeybaha kala duwan ee ciidamada oo ay tababareen dalal kala jaad ah ay hadda u muuqdaan kuwa uu khilaaf ka dhaxeeyo.
“ Imaaraadka Carabta oo ka dhan ah Qatar iyo Turkiga ayaa sidoo kale waxay u muuqdaan inay kooxeysi ka sameynayaan ciidamada ammaanka,” sidaasi waxa lagu xusay qoraalka kooxda xasaradaha adduunka.
Xasilooni darrida ka dhalatay saameynta khilaafka khaliijka ee Soomaaliya waxay sidoo kale ku fiday maamulada maxaliga ah oo kaalmo deeqsinimo ah ka hela Imaaraadka Carabta kana soo horjeeda Qatar sida ay tilmaamtay warbixinta kooxda.
Turkiga ayaa sameeyay isku day la isugu soo dhaweynayo kooxaha kala qeybsan ee Soomaaliya laakiin laguma guuleysan.
Warbixinta waxay sidoo kale xustay in heshiiskii DP World ee dekadda Berbera bishii Maarso uu dhaliyay dagaal cusub oo xagga afka ah kaasi oo meesha ka saaraya suurtagalnimada heshiis mustaqbalka ay gaaraan xukuumadda Muqdisho iyo maamulka Somaliland.
“ Wadamada Khaliijka waxay aaminsan yihiin in badbaadadooda ku xeran tahay iyaga oo la wareega badda cas iyo gacanka Cadan,” sidaasi waxaa yiri Rashiid Cabdi oo ah agaasimaha mashruuca kooxda ICG ee geeska Afrika.
Ilhaan Cumar oo u taagan xubinnimada aqalka Koongareyska Mareykanka